Wadahadalada lagu doonayo in lagu dhiso dowlad wadaag ah oo ka socda dalka Giriiga – Radio Daljir
Wadahadalada lagu doonayo in lagu dhiso dowlad wadaag ah oo ka socda dalka Giriiga
Athans, May 15 – Wadahadalo hor leh oo lagu doonayo in lagu soo dhiso dowladd wadaag ah oo uu yeesho dalkaasi Giriiga ayaa lagu wadaa inay maanta dib uga bilaabmaan dalkaasi Giriiga ,kaddib 9 maalmood markii hogaamiyayaasha axsaabta awoodda leh ee dalkaasi ay ku guuldarraysteen in ay isku racaan dowladd loo dhanyahay.
Xisbiga garabka bidix ayaa sheegay in uu ka horjeedo dowladd kasta oo wadaaga ah oo ku shaqayneysa siyaasadaha gunti-giijiska ee aan la jeclaysan.
Madaxweynaha dalkaasi Giriiga Karolos Papoulias oo hore ula kulmay hogaamiyayaasha axsaabta siyaasadda ee dalkaasi ayaa dalbaday xukuumad ka kooban dad aqoonyahano ah ama waxa loo yaqaan ?technocrat?.
Xisbiga muxaafidka ah ee New Democracy, xisbiga midigta-fog ee Syriza iyo kan shuuciga ah ee Pasok ayaa 8-dii maalmood ee ugu dameeyey ku guuldarraystay in ay sameeyaan xukuumad wadaag ah,kaddib doorashooyinkii baarlamaanigaa ahaa ee wadankaasi oo labadii xisbi ee dowladdii wadaaga ahaa ku jiray ee New Democracy iyo Pasok ay dhumiyeen aqlabiyadii kuraasta baarlamanka.
Cod-bixintii dhowaan lagaga adkaaday axsaabtii ku jirtay qorshayaasha samata-bixinta iyo gunti-giijiska ee dalkaasi Giriiga ayaa sare u qaaday dareen ku aadan in dalkaasi Giriigu uu dhumiyo xubintiisii seyladda dalalka isticmaala lacagta Euro-da ee loo yaqaan aaggga Euro.
Dalkaasi Giriiga ayaa waxaa ka jirta mashaqo dhinaca dhaqaalaha ah , waxana doorashadii baarlamaaniga ahayd ee Axaddii Asbuucii hore ka dhacday dalkaasi ay su?aal ka keentay kaalinta uu wadankaasi kaga jirayo seyladda Eurozone,waxana arrintaasi ay saamayn ku yeelatay suuqyada dhaqaalaha ee caalamiga ah.